← समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीलाई संविधानसभामा पुर्‍याउन सकिन्छ : अध्यक्ष थापा	4th International Gaijatra Pride Festival 2013 →
समलिंगी तेश्रोलिंगी अधिकारकर्मी एकछिन मौन बसे ।	काठमाडौं, साउन २८ – म प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवले समलिंगी तेश्रोलिंगी बुझ्ने । अरु मन्त्रालयका सचिवले नवुझ्ने र ? समलिंगी तेश्रोलिंगी बुझ्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवनै हुनु पर्ने र? समलिंगी तेश्रोलिंगी नवुझेर मन्त्रालयले कुनै काम नगरिदिएका छन् र र? वुझेर या नवुझेर केही समय अघि काठमाडौं तत्कालिन प्रमूख जिल्ला अधिकारीबाट हैरानी पाएका समलिंगी तेश्रोलिंगी अधिकारकर्मी एकछिन मौन बसे । एक जनाको कुरा राज्य संचालकको किन उठाउने । उनीहरुले भने हाम्रो मुद्धा महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले उठाइरहेको छ । मन्त्रालयमा छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् ।